प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम– कस्तो अवस्थामा पाइन्छ बेरोजगार भत्ता ? « Khabarhub
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम– कस्तो अवस्थामा पाइन्छ बेरोजगार भत्ता ?
काठमाडौ– सरकारले देशमै रोजगारीको सिर्जना गर्दै बेरोजगार अन्त्य गर्ने लक्ष्यसहित सञ्चालनमा ल्याएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम बुधबारदेखि सञ्चालनमा आएको छ ।
यो कार्यक्रम अनुसार सरकारले युवाहरुलाई रोजगारी दिन नसके निर्वाह भत्ताको वितरण गर्नेछ । भत्ता वितरणका लागि पनि विभिन्न मापदण्ड तोकिएको छ । युवालाई रोजगारी दिन नसकेको यो अवस्थामा निर्वाह भत्ता वितरण गरिने छ व्यवस्थगा गरिएको छ ।
कस्तो अवस्थामा पाइन्छ निर्वाह भत्ता ?
स्वदेशमा रोजगारी नपाएर दैनिक १ हजार ५ सयभन्दा बढी युवा जनशक्ति रोजगारीको खोजीमा विदेशिने गरेका छन् । यसरी विदेशिने
जनशक्तिलाई सरकारले आन्तरिक श्रम बजारमा खपत गर्ने लक्ष्यअनुसार रोजगार सूचना केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको जनाइएको छ ।
जसअनुसार, मन्त्रालयले वार्षिक १ लाख युवालाई आन्तरिक श्रम बजारमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
प्रकाशित मिति : १ फाल्गुन २०७५, बुधबार २ : ४० बजे